Archive du 20170301
Vahoakan�i Befandriana May trano, voadaroka, ho tsaraina...
Mbola raharaha mafana sy mitana ny sain�ny maro ny savorovoro tany Befandriana Avaratra. Raha ny vaovao farany azo omaly, dia niakatra fitsarana tao Antsohihy omaly ireo olona 31 voarohirohy tamin�ity raharaha ity
Andry Rajoelina sy Hajo Andrianainarivelo Miady sa manao sarimihetsika ?
Niara-dalana tamin�ny raharaha 2009 nisian�ny fanonganam-panjakana teto amin�ny firenena i Andry Rajoelina sy Hajo Andrianainarivelo.
Mpanao politika Malagasy Matahotra ny hisian�ny antoko matanjaka
Lohahevitra nifampizaran�ireo antoko politika 44 nandray anjara tamin�ny atrikasa farany nokarakarain�ny Fandaharanasan�ny firenena mikambana ho amin�ny fampandrosoana ny 21 sy 22 febroary 2017 teo
Hatao fitaovana amin�ny 2018 Mijoro ny fikambanana isan-karazany
Manombaka mifoha tsikelikely indray ankehitriny ireo fikambanana isan-karazany, indrindra ireny fikambanam-paritra ireny.
Dian�ny filoha tao Mahajanga Nisesy ny loza
Ny zoma 24 febroary dia efa fantatra fa ho avy ao Mahajanga ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo mambra sasantsasany ao amin�ny governemanta.
DISTIM Tafatsangana koa ny any Sakaraha
Tafatsangana ny alatsinainy 20 janoary teo, tao amin�ny Lyc�e Soa tao an-toerana ny DISTIM vaovao ao amin�ny distrikan�i Sakaraha Faritra Atsimo Andrefana.
Mpitondra tsy mahomby Tsy fahotana ny mibaboka, hoy ny Seces
Namoaka fanambarana ny alakamisy 23 febroary 2017 teo ny Seces (Syndicat des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs-Enseignants de l�Enseignement Sup�rieur).
Taratasin�i Jean Mandrora mitsilany
Miarahaba an�i Jean ny tenako ! Tena mijery sy manara-maso anao matetika aho ry Jean dia tena lasa saina be mihitsy hoe ho ankiniko aminao tokoa vare ny ho avin�ity fireneko ity e !
Tale jeneralin�ny Jirama Tsy mbola misy sahy mametraka dosie
Ny 25 martsa ho avy izao no farafametrahana ny antontan-taratasy hifaninanana ho tale jeneralin�ny orinasa jirama, raha ny fanazavan�ny tompon�andraikitra.
Printsy Albert II de Monaco Manatanteraka asa soa eto Madagasikara indray
Noraisin�ny filoham-pirenena Malagasy teny Iavoloha ny printsy Alexandre Louis Pierre Grimaldi izay eto Madagasikara nanomboka omaly. Hiompana betsaka amin�ny asa sosialy sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny fivahinianan�ny mpanjakan�i Monaco amin�ity taona 2017 ity.
Hiary Rapanoelina Naverina eny Antanimora
Ny 7 martsa izao no hivoaka ny didim-pitsarana farany mikasika ny raharaha Hiary Rapanoelina, raha ny vaovao voaray tetsy amin�ny lapan�ny fitsarana Anosy omaly.
Fanalam-baraka anaty facebook Olon'ny fitondrana no ao ambadika ?
Sesilany ny fanalam-baraka sy ny fanehoana teny mamoafady tao anaty vondrona facebook iray fantatra amin�ny anarana hoe �Ndao handalina politika avo lenta�, saingy toa afa-maina sy iniana tsy resahina ny momba ny mpandrindra io vondrona iray io.
JEAN NIRINA - Hafari Malagasy Enim-bolana an-tranomaizina no saziny
Nivoaka omaly ny didim-pitsarana mikasika ireo karazana raharaha nanenjehana ny filoha nasionalin�ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina ka nitazonana azy am-ponja vonjimaika.
Manafotsy ny efa mainty !
Tena talentan�ity fitondrana HVM ity mihitsy ny fiarovana ny olona efa hita fa nanao ny tsy mety.
EPP Ambihy-Arivonimamo II Nanateran�ny depiote Rodin dabilio sy solon-tsakafo
Nasiam-panatsarana ny EPP Ambihy, distrikan�Arivonimamo II. Dabilio miisa 21, vola hoenti-mampihodina ny �cantine scolaire�
Sendikan�ny mpampianatra Tezitra amin�ny minisitera
Tapaka tanteraka ny fiaraha-miombon�antoka eo amin�ny minisiteran�ny fanabeazam-pirenena sy ny sendikan�ny mpampianatra malagasy.
ADY AMIN�NY ARETINA SIDA Misokatra ny fifaninanana tantara an-tsary
Mitohy hatrany ny ady amin�ny aretina SIDA, indrindra fa ny fanilikilihana ireo efa voa ho an�ny fikambanana Omasave.
KAOMININA AMBOHIBAO ANTEHIROKA Tsisy "WC" sy trano fidiovana ny 30 %-n�ny mponina
Tsy manana trano fivoahana (WC) sy trano fidiovana ny 30 %-n�ireo mponina ao anatin�ny kaominina Ambohibao Antehiroka.